News Archives - Media Update News
လာပြီးတောင်းရမ်းတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် အပျိုကြီးဘဝမှာပဲ တူတွေတူမတွေနဲ့ နေသားကျပျော်နေပါပြီဆိုတဲ့ ပပဝင်းခင် ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါကအနုပညာလောကမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီး ပပဝင်းခင်ကိုမေ့နေကြပြီလား။ အသံသေးသေးလေးနဲ့ယဉ်ယဉ်လေးလှတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ ပပဝင်းခင်ကတော့ လက်ရှိမှာချစ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအချိန်ပေးပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာပဲဖစ်ပါတယ်။ ယနေ့ချိန်ထိအဖော်မရှာသေးတဲ့ ပပဝင်းခင်ကတော့ တူတွေတူမတွေနဲ့ပျော်နေပါပြီတဲ့.. ။ ပပရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ သူမကိုသဘောကျလို့လာရောက်တောင်းရမ်းကြတဲ့ သူတွေရှိပေမယ့်ကိုယ်ချစ်သူချစ်ဖူးစာမဆုံသေးတော့ ယနေ့ချိန်ထိအပျိုကြီးပါပဲလို့ပြောပြလာခဲ့တယ် ။ ယနေ့ချိန်ထိလှမြဲလှဆဲပပဝင်းခင်ကို ချစ်သေးကြတယ်မလားနော် ။ ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ …
ပစ္စည်းအစပြိုင်လုနေကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြား ဗျာများနေရတဲ့ချစ်စရာဗွီဒီယိုလေးကို မျှဝေလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သလို တေးသီချင်းတွေလည်း သီဆိုပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို နှစ်အတော်ကြာအောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို ချစ်ကြလို့ ယနေ့အထိ အားပေးချစ်ခင်နေကြဆဲပါ.. ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လောကကြီးမှာ မရှိတော့ပေမယ့်လည်း သားနဲ့သမီးကို အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ရင်း …
ညီအမအရင်းတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း အစ်မဖြစ်သူနဲ့မတူပဲကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို ပြသလာတဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုး ဟိုးအရင်က ဦးလွင်မိုးတို့မိသားစုလေးကတော့ပ ရိသတ်ကြားမှာပျော်ရွှင်စရာနဲ့အားကျစရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးပါ။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုးဆိုတဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်း ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အမဖြစ်သူယွန်းဝဒီလွင်မိုးကတော့အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်နဲ့ ပိုရင်းနှီးခဲ့သူပါ ။အခုမှာတော့ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးLiamလေးနဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း သားလေးကိုဖေဖေမေမေညီမလေးတို့နဲ့ထားခဲ့ပြီး သူတို့ဟာနိုင်ငံခြားကိုပညာသွားသင်နေတာပါ။ မြန်မာပြည်ကို အလည်လောက်သာပြန်လာပြီးမိသားစုတွေတွေ့ဆုံလေ့ရှိတာပါ ။ ခုမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေနေကြောင့်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့် အမဖြစ်သူရှိရာနိုင်ငံကို ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာသွားရောက်နေတာပါ။ညီမနှစ်ယောက်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းတူတူအလည်ပတ်တွေသွားနေတာပါ။ အခုမှာလည်းတစ်ယောက်တစ်ယောက်မတူတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့အပြတ်မိုက်နေတဲ့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော် ။ Credit ; Cele …
သူမဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မူးယစ်သားကောင်ဘဝကို လူငယ်တွေမနစ်မြုပ်စေဖို့ ထုတ်ဖော်ပြောပြလာတဲ့အဆိုတော် တွင်ကယ်လ် ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ တွင်ကယ်လ် လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သူမရဲ့သီချင်းလေးတွေကို တန်းပြီးရေရွတ်မိတဲ့ထိ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။ သူမအနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို ၁၆ နှစ်ထဲက စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ရှင်နော်အေခွေအပိုင်ရမှပေးမယ်သီချင်းနဲ့ အခွေစတင်ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တွင်ကယ်လ်ကတော့ အချိန်အကြာကြီး အနုပညာလောကကပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာပါ. .။ ” တွင်ကယ်လ် ၂၄ …
နွယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ အချစ်မေတ္တာလုံလုံလောက်လောက်မရခဲ့လို့ ပိုင့် ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ တတ်သစ်စအနုပညာကြယ်ပွင့်လေးဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့အနုပညာရေးမှာပါရမီပါသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာသသရုပ်ဆောင်ဦးခင်လိုင်ရဲ့ တစ်ဦးထဲသောသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ..။ လက်ရှိသူမကအနုပညာတွေဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေလဲရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောအိမ်မက်ထဲက အိမ်မက့ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလဲ နွယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်ပါတယ်. .။ ဒီနေ့မှာတော့သဇင်ထူးမြင့်က အိမ်မက်ထဲအိမ်မက်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက စုံတွဲပုံလေးတွေကိုချပြလာရင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေလုံလုံလောက်လောက် မရခဲ့တဲ့နွယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက် ပိုင့်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးစုံတွဲပုံလေးတွေတင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အားကျနေကြပြီမလားနော် ။ ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်. …
သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သူမမွေးနေ့မှာ ပရိတ်သတ်အတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မေလသံစဉ်
သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သူမမွေးနေ့မှာ ပရိတ်သတ်အတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မေလသံစဉ် ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ မေလသံစဉ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့က မေလ (၂၃) ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မေလသံစဉ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မေလသံစဉ်ကတော့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး မေလသံစဉ်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မေလရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မေလသံစဉ်ကတော့ ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် …
ဂန်ဂူးဘိုင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့ ဂန်ဂူးဘိုင်အတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသလာတဲ့ ဒီး
ဂန်ဂူးဘိုင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့ ဂန်ဂူးဘိုင်အတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသလာတဲ့ ဒီး The Model Academy 2019 ရဲ့ 1st Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dee ကတော့ အမိုက်စား ရုပ်ရည်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ Dee က အခုဆိုရင် သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလမ်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကို ရောက်ရှိလို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
လုပ်ချင်တာရှိလို့ အမေကိုအမျိုးမျိုးမျက်နှာချိုသွေးပြနေတဲ့ Pilar လေးရဲ့ပုံလေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြသလာခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်း
လုပ်ချင်တာရှိလို့ အမေကိုအမျိုးမျိုးမျက်နှာချိုသွေးပြနေတဲ့ Pilar လေးရဲ့ပုံလေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြသလာခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်း အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် အောင်မြင်လာပြီး နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ ။ ချမ်းချမ်းက အခုဆိုရင် သူမရဲ့ ဒုတိယမြောက်သမီးလေးနဲ့အတူတူ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးရပ်မြေမှာနေထိုင်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ချမ်းချမ်းက အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားပြီး သမီးတွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သမီးလေးပီလာကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ရင်း သမီးလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကို …
တစ်လသားအရွယ်လေးနဲ့မေမေမှမေမေဖြစ်နေတဲ့ သားလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ စုစုဝေ စုစုဝေကတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးအဆိုတော် Mikis နဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စုစုဝေနဲ့ Mikis တို့ဟာ ချစ်သူတွေအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ပြီးမှာ မကြာခင်အချိန်ကပဲ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mikis နဲ့ စုစုဝေတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ကပဲ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ …
အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားရတဲ့အတွက် ဝင်ငွေနည်းပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိက္ခာလုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားရတဲ့အတွက် ဝင်ငွေနည်းပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိက္ခာလုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ဖြူဖြူထွေးကတော့ နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင် စိတ်သဘောထားလေးကလည်း နူးညံ့ဖြူစင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကနေ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးက အခုဆိုရင် အားလုံးရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိဘအပေါ်မှာ သိတတ်လိမ္မာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက တစ်နေ့တစ်ခြားပိုမိုအောင်မြင်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဖြူဖြူထွေးက ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ …